Isamsung yeyona nto ithengiswa kakhulu eYurophu kwikota yesibini | I-Androidsis
Isamsung yathweswa isithsaba njengolona hlobo luthengisa kakhulu eYurophu
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo siyibonile loo nto Isamsung iphucule iziphumo zayo zezemali kwikota yesibini yonyaka. Ngapha koko, kwavezwa ukuba Intengiso enkulu yaseKorea yayiphucuka kwikota yesibini yonyaka, ngokuyinxenye iqhutywa yingxaki emfutshane kaHuawei. Ukuthengiswa kwebrand eYurophu ngoku kuyatyhilwa, apho eyona ndawo iphambili kuyo icacile.
La manani abonisa kwakhona ukuba inkampani kuye kwaziwa ukusebenzisa ithuba likaHuawei elibi. Ukusukela eYurophu sifumana ukukhula okumangalisayo kwintengiso ye-Samsung, ngokungathandabuzekiyo ebalulekileyo kuphawu lwaseKorea. Kwaye kukho iintshukumo ezinomdla kunye nezinye iimveliso.
1 Isamsung kunye neXiaomi zezona zikhula kakhulu
2 I-Galaxy A50: Eyona fowuni ithengiswa kakhulu eYurophu
Isamsung kunye neXiaomi zezona zikhula kakhulu
Isamsung ihlala kwindawo yokuqala eYurophu kwikota yesibini yonyaka. Uphawu lwaseKorea uthabathe isabelo sentengiso sama-40,6%, Ukulawula ngokucacileyo kule marike. Inkampani ikubonile ukuthengisa kwayo kukhula nge-20% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, ubukhulu becala beqhutywa ziingxaki zikaHuawei phakathi kukaMeyi noJuni. Ndiyabulela kwezi ziphumo, bathengise ezinye iifowuni ezizigidi ezintathu, ke oko kufikelela kwi-18,3 yezigidi. Ikakhulu iqhutywa kwinqanaba eliphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, siyayibona indlela iHuawei ephulukana ngayo ne-16% yentengiso xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, ukongeza ekunikezeleni phantse iipesenti ezi-4 zesabelo sentengiso. Lo mzuzu mibi wegama laseTshayina ibiyinto ngokungathandabuzekiyo eyenzakalisa ukuthengisa kwayo, ivumela iimveliso ezinje ngeSamsung ukuba zikhule. I-Apple nayo iwela kweli candelo, kwimeko yayo nangaphezulu kweHuawei, ngokuwa kwe-17%.
IXiaomi lelona hlobo likhula ngokukhawuleza ngeSamsung, Kwaye ekuphela kwento ekufuneka ikhule kwi-5 ephezulu yeemveliso ezithengisa kakhulu. Uphawu lwesiTshayina lufumene ukukhula okumangalisayo ngama-48% xa kuthelekiswa nelo xesha linye kunyaka ophelileyo, likwazile ukuphinda kabini ukuthengisa. Iziphumo ezilungileyo zenxalenye yazo, ezibonisa ukuba iqhubeka njani ukukhula kwimakethi yaseYurophu. Nangona ii-brand ezinje ngeApple zisesemgama obonakalayo, akukho ngqiqweni ukucinga ukuba umenzi waseTshayina uyaqhubeka nokusondela koku.
I-Galaxy A50: Eyona fowuni ithengiswa kakhulu eYurophu
Ukongeza, idatha ye ezona fowuni zithengiswa kakhulu eYurophu kwikota yesibini yalo nyaka. Isamsung iphinde iphumelele kakhulu kule nkalo, njengoko ineemodeli ezintathu phakathi kwabona bathengisi bahlanu. Enye yazo yeyona fowuni ithengisa kakhulu kwezi nyanga zintathu zelizwekazi.
Le yiGalaxy A50, Esithweswe isithsaba somthengisi ogqwesileyo, kunye neeyunithi ezizigidi ezi-3.2 zithengisiwe. Ifowuni okwangoku yeyona nto iphambili kuluhlu oluphakathi lweSamsung, esinokuthi siluthenge eSpain, kwaye lolunye lolona khetho lubalaseleyo esilufumanayo kweli candelo lentengiso. Kuba iyintoni na ifowuni elungileyo, ayothusi into yokuba ithweswe isithsaba njengoyena mthengisi ubalaseleyo.
Enye imodeli yeSamsung, i-Galaxy A40, ithatha indawo yesibini, ngeeyunithi eziyi-2.2 yezigidi ezithengisiweyo. I-Galaxy A20e ikuluhlu, kwimeko yayo kwindawo yesine ngokuthengisa iiyunithi ezigidi ze-1.9. Ukusuka kwinto esinokubona ukuba olu luhlu lwegama laseKorea iGalaxy A lwenza kakuhle kakhulu kwintengiso, kunye neentengiso ngokungathandabuzekiyo eziqhuba inkampani namhlanje. Nangona kungothusi, kuba kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kunye neziphumo zenkampani, kwakusele kusaziwa ukuba okwangoku kukwinqanaba eliphakathi elithengisa kakhulu kwinkampani.
Nangona kunjalo Kuya kufuneka sibone ukuba kwenzeka ntoni kwikota yesithathu yonyaka, xa ibonisa indlela uHuawei abuye ngayo. Emva koko kuya kufuneka sibone ukuba ngaba uphawu lwaseKorea luyakwazi ukugcina le migama, okanye ukuba babuyela kwindlela engathandekiyo, njengaleyo bahlangabezana nayo kwi-2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isamsung yathweswa isithsaba njengolona hlobo luthengisa kakhulu eYurophu
Oku kukucaciswa okuqinisekisiweyo kweVivo iQOO Pro 5G
Cela iifoto kuye nakubani na emhlabeni ukuba uzithathe kunye noLoxoxie